Fadeexo: Canshuurta laga qaadi jiray jaadka muqdisho oo mudo labo cisho gudaheed lagu helay $34,000 oo la xadi jiray | Kismaayo24 News Agency
Fadeexo: Canshuurta laga qaadi jiray jaadka muqdisho oo mudo labo cisho gudaheed lagu helay $34,000 oo la xadi jiray
Wednesday May 17, 2017 - 7:07 under Somali News by Tifaftiraha K24
Dowladda federaalka soomalia ayaa sheegtay in canshuurtii qaadka laga qaadi jiray ee qasnada dowladda kusoo dhici jirtay in mudo ah la musuq maasuqi jiray.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta soomalia eng c/raxmaan yariisow ayaa waxyar ka hor waxa uu bartiisa facebooka kusoo qoray in mudo labo cisho ah lagu bad baadiyay lacag aad u badan oo la ogeyn halka markii hore ay aadi jirtay maadama qasanadda dowladda aysan kusoo dhici jirin.
” Maanta oo aan booqanay Furdada gegida dayuuradaha ee Adde Adde ayaan dhiirigelinay saraakiisha Furdada ee Wasaarada Maaliyada oo suurtogeliyey in maamulka cusub oo labo cisho joogo inuu ururiyey canshuur ka badan $ 130,000 oo ka muuqda koror $34,000 oo labo cisho lagu badbaadiyey” ayuu sheegay wasiir yariisow.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay jiri doonto isla xisaabtan dhab ah oo lala yeelan doono waaxaha kala duwan ee canshuurta wasaaradda maaliyadda si looga fogaado musuq maasuq lagu sameeyo hantida qaranka.
” Waxaa jiri doona isla xisaabtan ku aadan halka ay lacagta intaas la’eg ku maqnaan jirtey labo cisho ka hor – lacagta baaqatay labo cisho waxey bishii noqon kartaa $510,000.00 oo in ka badan 5000 ciidan mushaar lagu siin karay – Musuqmaasuqa waa waxa la degey dalka, mana u dulqaadan doono” ayuu yiri yariiso.
Waa arin aad loola yaabo in lacagta intaas la eg mudo dhowr sano ah ay shaqsiyaad jeebkooda ku dhaceysay lana musuq maasuqaayay canshuurta qaadka laga qaado ah tan ugu badan oo dowladda ay dalka ku hormarin karto waxaana xukuumadda kheyre iyo madaxweyne farmaajo ay sheegeen in howsha ugu badan ay qaban doonan mudo xileedkooda ay noqon doonto la xisaabtan ka hey’addaha dowladda iyo ka hortagidda musuq maasuq lagu sameeyo hantida qaranka.